एक खुट्टाको भरमा नाच्ने रोमा न्यौपाने पक्राउ, प्रहरीले नै ‘उम्कायो’ फरार अभियुक्त, विस्तृतमा पढ्नुहोस् !
ARCHIVE » एक खुट्टाको भरमा नाच्ने रोमा न्यौपाने पक्राउ, प्रहरीले नै ‘उम्कायो’ फरार अभियुक्त, विस्तृतमा पढ्नुहोस् !
काठमाडौँ, । गत शनिबार जमलस्थित राष्ट्रिय नाचघरभित्र सांस्कृतिक कार्यक्रम भइरहेको थियो । बाहिर घुमुवा टोलीका तीन प्रहरी कसैलाई पक्रने सुरसारमा कुरिरहेका थिए । कार्यक्रम सकिएपछि प्रहरी टोलीले एक खुट्टाको भरमा नाच देखाएर चर्चा बटुलेकी रोमा न्यौपानेलाई पक्राउ गर्‍यो । कान्तिपुर दैनिकले समाचार छापेको छ ।
रोमालाई सुरुमा महानगरीय प्रहरी वृत्त, दरबारमार्ग पुर्‍याइयो । त्यहाँबाट महानगरीय प्रहरी वृत्त, लैनचौर लगियो । लैनचौर वृत्तले दरबारमार्ग वृत्तमै फिर्ता पठायो । सोही साँझ दरबारमार्ग वृत्तले रोमालाई छाडिदियो । आखिर कसैले भनेकै भरमा रोमालाई दिनभर कुरेर प्रहरीले किन पक्राउ गर्‍यो ? अनि उनलाई दिनभर यताउता डुलाएर साँझ त्यत्तिकै किन छाडियो ?